Maxay tahay waxa uu Virgil van Dijk sameyn jiray yaraantiisii ee ka caawiyay inuu noqdo daafaca ugu fiican Isgiriiska?? – Gool FM
Maxay tahay waxa uu Virgil van Dijk sameyn jiray yaraantiisii ee ka caawiyay inuu noqdo daafaca ugu fiican Isgiriiska??
(England) 29 Juunyo 2019. Daafaca xulka qaranka Holand iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa aaminsan in kubaddaha uu ku ciyaari jiray wadooyinka ay wax badan ka caawisay inuu gaaro waxa uu hadda yahay.
Virgil van Dijk ayaa ku guuleystay abaalmarinta daafaca ugu fiican iyo ciyaaryahanka ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkii hore kaddib markii uu si fiican u ciyaaray, waxaana xiligan lagu tilmaamaa inuu yahay kan ugu fiican caalamka ee booskiisa.
Daafaca reer Holand ayaa xili ciyaareedkii tagay si weyn uga caawiyay kooxdiisa Liverpool inay si adag ugu dagaalanto ku guuleysiga horyaalka Premier League oo ay ugu dambeyntii kaga dhameysteen booska labaad, balse waxay xili ciyaareedka ay ku soo gabagabeeyeen ku guuleysiga tartanka xiisaha badan ee Champions League.
Hadaba Virgil van Dijk ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Waxaan in badan ka faa’iday kubaddihii aan si kali ah wadooyinka ugu ciyaari jiray, waxaan inta badan ciyaari jiray ciyaarta shanleyda ah markii aan yaraa, waxaana maalmahaas jeclaa dhanka weerarka”.
“Waan ogaa waxa ay weeraryahannadu ka fakarayaan xaaladaha qaarkood, sidoo kale xirfadeyda waxay ku leedahay door weyn”.
“Haddii aad dooneyso inaad horumar sameyso ciyaaryahan ahaan kubada cagta, waa inaad sii wadataa inaad saaxiibadaa kula ciyaarto wadooyinka”.
Waxaa xusid mudan in Virgil van Dijk uu haatan u sharaxan yahay ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or 2019, iyadoo ay kula tartamayaan xiddigo ay ka mid yihiin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah iyo Bernardo Silva.
Xulalka gabadhaha Netherlands iyo Sweden oo iska xaadiriyey afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019… + SAWIRRO
Milkiilaha kooxda Liverpool oo muujiyay bar-tilmaameedkooda ugu weyn ee xilli ciyaareedka soo socda